Global Voices teny Malagasy » Brezila : Lahatsary Mananihany Nosivanin’ny Rede Globo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Febroary 2014 22:23 GMT 1	 · Mpanoratra Raphael Tsavkko Garcia Nandika (fr) i Jean Saint-Dizier, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika
Dikasary avy amin'ilay lahatsary mananihany: i William Bonner, mpanolotra fandaharana, sy ilay Patrícia “Correta” tsy tena izy (“Patricia Correct”) ao anatin'ilay “lahatsary tsy tian'ny Globo ho hitanareo”.
Mitondra mankany amin'ny pejy amin'ny fiteny Portiogey daholo ny rohy rehetra ato.
Kianin'ilay Breziliana mpikatroka mafàna fo sady mpiantsehatra, Rafucko,  ao amin'ny pejiny Facebook ny namafàn'ny Youtube ny iray tamin'ireo lahatsariny noho ny fangatahan'ny Rede Globo  (FnM: fantsom-pahitalavitra breziliana lehibe indrindra). Tao anatin'ny ora valo teo ho eo monja dia nahazo mpitsidika maherin'ny 40.000 ilay lahatsary.
Teboka niaingàn'ilay fikirakirana lahatsary, nakarina tety anaty sera tamin'ny 18 Febroary, ny matoan-dahatsoratry ny “Jornal Nacional” (FnM: ny mitovy amin'ny vaovao amin'ny 7:30 ora hariva aty amintsika), fandaharana sangany atolotry ny sampana fampahalalam-baovaon'ny Globo. Naniry izy ny hamoaka mibaribary ny familiviliam-baovao vohizin'ilay fantsona momba ireo hetsi-panoherana nitranga tao amin'ny firenena hatramin'ny Jona 2013. Ao anatin'io lahatsary io dia nalain'ilay mpikatroka mafàna fo ny toeran'i Patricia Poeta mpiara-manolotra ny vaovao (nanjary ho ‘Patrícia Correta’, i Patricia Correct, ao anatin'ilay hanihany) ( ary nanitsy ireo fanehoankevitr'i William Bonnery, mpanao gazety namany, izy roa izay samy mpanolotra vaovao ao amin'ny Journal Nacional).
Isan'ny teboka nitondran'ilay mpihanihany fanamarihana : ny anjara toeran'ny sampana fampahalalam-baovaon'ny Globo tamin'ny fanaovana tatitra ny fahafatesan'ilay mpilalao sarimihetsika Santiago Andrade nandritry ny hetsi-panoherana tao Rio de Janeiro , sy ireo fiampangàna  nataon'ireo fikambanana Globo (nataon'ny rantsany an-tsoratra, Le Globo) nanenjika ilay solombavambahoaka Marcelo Freixo – nampangaina tamin'ny fomba nanafintohina tokoa  ho olona akaiky an'ireo mpanao hetsi-panoherana ahiahiana ho namono ilay mpilalao sarimihetsika. Ny fisisihan'ilay fantsona hampiasa ny fomba fiteny hoe “mpandroba” mba hilazana ireo mpanao fihetsiketsehana, mifamatotra amin'ny fitanilàny ka mametraka ny herisetra ho fiarovan-tenan'ireo mpanao hetsi-panoherana hitovy laharana amin'ny herisetran'ny Polisin'ny Tafika, izay, araka ny ambaran'ny  Abraji (Fikambanana mpanao gazety mpanadihady) dia tompon'andraikitra amin'ny 75% n'ny herisetra nihatra tamin'ny mpanao gazety.
An'arivony ireo mpampiasa Facebook nitroka ilay fiampangàna avy amin'i Rafucko, ireo mpampiasa ireo izay namaly ny fangatahan'ilay mpananihany mba hizara ilay lahatsary amin'ny sehatra maro isan-karazany toy ny Youtube sy Vimeo. Nefa maro tamin'izy ireny no voafafa ihany koa noho ny fangatahan'ny Rede Globo, hoy ilay mpikatroka.
Ireo izay nitròka azy iny, afaka mizara ianareo! Ato ho ato dia ho averiko apetraka ety anaty sera indray izy iny miaraka amin'ny lohateny hoe : Ilay lahatsary tsy tian'ny Globo ho hitanareo”. Ho fahombiazana tokoa izany. Efa izany sahady e.
Ny andron'iny ihany, notoherin ‘i Rafucko tao amin'ny bilaoginy ny zavatra nolazainy fa mitovy amin'ny sivana :
Tsy nataotao foana ny teny faneva hoe “Henjana ny fahamarinana, nanohana ny jadona ny Rede Globo (ary mbola manohana hatrany)” izay re betsaka indrindra tany anatin'ireo hetsi-panoherana !”
Tamin'ny herinandro lasa, afaka nahita ny olona rehetra fa nandefa fanadihadiana lavabe sy matoan-dahatsoratra poak'aty momba ny fahalalahana maneho hevitra ilay fantsom-pahitalavitra. Hatrany ampanombohan'ny hetsi-panoherana no efa nampiasàn'ny Rede Globo foana ireo sary nalain'ny tsy miankina nefa tsy ilazàny ny anaran'ny tompony no sady tsy nangatahany alàlana na kely akory aza.
Teo ampiandrasana izany, tsy ampy ora 12 akory taorian'ny nametrahana azy tety anaty sera dia nofafàna ny lahatsariko manakiana sady maneso ny Jornal National. Ary tsy aty amiko no hanaovana kabary momba ny “zon'ny mpamorona”.
Nanakiana ny Rede Globo ilay mpikatroka mafàna fo, Pedro Ekman, sady niteny momba ity olan'ny zon'ny mpamorona ity :
Ny Globo no goavana indrindra amin'ny fanivànana ny aterineto breziliana. Fafàn'ny Globo ny votoaty amin'ny filazany ho fanànany ny zon'ny mpamorona. Ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona dia mamela ny fampiasàna MALALAKA ny ampahany fohy amin'ireo tsanganasa voaaro mba ho azo ampiasaina aminà fanakianana na hanihany. Nefa tsy zavatra nifotoran'ny Globo velively izany hoe fanajàna ny lalàna izany, jereo ny 1964 (FnM: ary ny firotsahan'ilay fantsom-pahitalavitra hijoro miaraka amin'ny mpanao jadona sy ny mpanongam-panjakana tamin'ny 1964).
Manampy  toy izao i Bruno Natal, mpanao gazety, ao amin'ny bilaoginy :
Ao Etazonia ohatra, tsy mandaitra ireny honohono tsy misy fotony ireny hoe manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, satria any an-toerana, misy lalàna iray antsoina hoe Fair Use (Fampiasàna ara-drariny) , iray mamela ny famerenana mandefa/mamokatra izay votoaty rehetra andrian'ny saina raha tena ilaina ny fampiasàna azy, izay izany indrindra no zava-misy eto amin'ity tranga ity. Famaranana azy, ahoana no ahafahan'i Rafucko manakiana ny matoan-dahatsoratra raha tsy asehony ho hita izany?
Tsy idirana akory ny resaka fahalalahana artistika, ary alohan'ny hahatongavan'ny sasany hiteny hoe tsy misy nilàna ny fanehoana ireo saripikan'ilay gazety, fa niresaka fotsiny dia ampy (anjaran'ilay artista no mifidy izay endrika tiany).
Tsy misy afa-tsy anarana tokana ho azy io ary ny rehetra no mahafantatra hoe inona izay.
Ny andro nanaraka io, ny 19, tamin'ny fanambaràny talohan'ny nanivànana ilay lahatsary dia nisaoran'i Rafucko ireo mpamandrika ao amin'ny fantsony tamin'ny fizaràna ilay lahatsary, izay nahazo mpitsidika 500.000, lasa ho ny lahatsary be mpijery indrindra tao amin'ny fantsony YouTube :
Rehefa miteny ho an'ny fahalalahana, izay rehetra ezaka faneriterena sy fanivànana dia vao mainka hanamafy ny feontsika.
lahatsary orizinaly voasivana
Tatiane Rosset, ao amin'ny bilaogy Youpix, manamarika hoe :
Satria tsy adala akory ny ety anaty aterineto, lavitry ny afo ny kitay, misy ny fomba hafa hahafahana mijery ilay lahatsary izay ilalaovan'i Rafucko ny toeran'i Patrícia Correta (vazivazy kely) manitsy ilay mpiara-manolotra fandaharana aminy nandritry ny famakafakana ny matoan-dahatsoratra fanaony. Ny iray amin'ireny dia fanapariahana ireo fifampizarana izay ao amin'ny YouTube ihany aza (ny iray dia efa maherin'ny in-400.000 no nisy nijery talohan'ny namafàna azy, ary ny iray hafa dia efa mahatratra ny 190.000).
Ny iray hafa, mazava loatra, ao amin'ny Vimeo. Satria tsy fantatra hoe inona no antony maizina, ireo rehetra izay ~~misedra olana amin'ny resaka fahalalahana maneho hevitra~~ eto amin'ity firenena ity, nahatonga ny hoe ny Youtube no fantsona fototra, saingy tsy io irery no hany fomba ahafahana mandefa lahatsary ety anaty sera.
Ny sivàna, nangatahan'ny Rede Globo noho ny hoe “tsy fanajàna ny zon'ny mpamorona”, dia mitarika fanontaniana hoe : handeha hatraiza ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty sera ety ? Tena malalaka tokoa va re ny tontolo dizitaly ?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/02/28/58247/
 nahazo : https://www.facebook.com/okcufar/photos/a.155342024548846.38977.155319264551122/584041095012268/?type=1&stream_ref=10
 fahafatesan'ilay mpilalao sarimihetsika Santiago Andrade nandritry ny hetsi-panoherana tao Rio de Janeiro: https://pt.globalvoicesonline.org/2014/02/12/morte-de-cinegrafista-em-protesto-acende-debate-sobre-legislacao-de-mao-dura-no-brasil/
 nampangaina tamin'ny fomba nanafintohina tokoa: https://www.facebook.com/MarceloFreixoPsol/posts/704228236284102
 Nanakiana : https://www.facebook.com/okcufar/photos/a.155342024548846.38977.155319264551122/584041095012268/?type=1&comment_id=1555690&offset=0&total_comments=131
 nisaoran'i : https://www.facebook.com/okcufar/posts/10202643621707307?stream_ref=10
 manamarika hoe : http://www.youpix.com.br/comportamento/william-bonner-rafucko/?fb_action_ids=10152322778973436&fb_action_types=og.likes